Wednesday December 26, 2018 - 11:40:53 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wadanka Boorma wararka laga helayo ayaa sheegaya in xukuumada Myanmar ay dadka musliminta ah ee kasoo jeeda gobolka Rohinga gaar ahaan kuwooda la ildaran xanuunada ay u diiday in Isbitalada wadankaasi dhiig looga shubo.
Wargeyska Washington Post ee kasoo baxa dalka Mareykanka oo soo xiganaya illaa lix hay’adood oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka ayaa shaciyay in dadka muslimiinta ah ee xanuunsanaya aysan dhiig ka helin Isbitallada xukuumada Myanmar xitaa haddii ay naftooda halis ku jirto.
Washington Post waxay sheegtay in Muslimiinta Rohinga ay ku nool yihiin Kaamam ciriiri ah oo ku yaala gobolka Araakan kadib markii xoog loogasoo barakiciyey guryihii ay deganayen halkaasna ay ku heysato xaalad caafimaad darro iyo mid nolol xumo oo aad u daran.
Baniyada dhiiga bixiya ee ku yaalla gobolka Rohinga ayaa si bareer ah dhiigga ugu diida qof kasta oo muslim ah waxa ayna ku andaconayaan in amarkaasi uu kaga yimid dhanka xukumadda iyagoo aan kala sooceyn xaaladaha caafimaad ee degdega ah iyo kuwa iska caadiga ah.
Hey’adaha ka shaqeeyo arrimaha gargaarka ee booqday kaamamka ku yaala gobolka Araakaan ayaa intaas ku daray in sababta ugu weyn ee dadka musliminta ah dhiigga loogu diidayo in ay tahay dadka Buudiyiinta ah oo aan ogoleyn in dhiigooda la siiyo qof aan Buudi ahayn Isbitaalladuna ay ku qasban yihin in ay dalabkaasi cunsurinimada ah fuliyaan ama ay waayaan Kalyanti ay dhiig joogta ah ka helaan.
Boqolaal dad muslimin ah oo la ildaran xanuuno kala duwan ayaa ku sugan gudaha kaamamka gobolka Arakaan sidoo kalena waxaa jiro boqolaal qof oo qalliino u baahan haba ugu badnaadaane dumarka foosha ah iyo dadka qaba dhaawacyada kala duwan.
Xilli ay taagan tahay duruuftan adag ayaa la sheegayaa in qaar kamid ah Naashidiinta ku sugan gudaha kaamamka Rhinga ay bilaabeen Mashruuc dhiig looga aruurinayo dadka Musliminta ah, si loogu badbaadiyo Muslimiinta kale ee u baahan mashruucaas oo uu hogaaminayo Nin ganacsade Muslim ah oo deegaanka kasoo jeeda, kaas oo wixii uu hanti lahaa u huray, soo bandhigista iyo kaalmeynta dadka tabaaleysan ee halkaasi ku dhaqan.
No Mawng waa 48 sano jir ah oo kasoo jeeda isla gobolka Arakan waana ganacsadaha iminka bilaabay mashruucan dhigga loogu aruurinayo dadka Musliminta Rohinga, wuxuuna sheegay in qof kasta oo shubaya Bac dhiig ah ay ugu deeqayaan lacag dhan 10 dollar si uu xaajaadkiisa ugu kaalmeysto, uuna qeyb kaga noqdo dadka dhiigooda ugu deeeqaya walalahooda musliminta ah ee u baahan.
Waxa uu sheegay in lacagta ay bixinayaan aysan ahayn mid ay dhiigga qofka ku gadanayaan balse ay tahay kaalmo ay siinayaan maadaama qofka dhiiga shubay uusan mudo dhowr maalin ah qoyskiisa u shaqeyn Karin, muhiimna ay tahay in dadku ay arinkaasi ogaadaan.
Ciidanka Military Xukumada Myanmar iyo Maleshiyad Buudiyiin ah oo iskaashanaya ayaa wadankan ka wada isir sifeyn ay ku hayaan dadka musliminta ah ee laga tirada badan yahay, waxana la xasuusta in sanadkii lasoo dhaafay ay gobolka Arakaan ka geysten xasuuq wadareedyo ka dhan ah dadka musliminta, halkaas oo ay ku dileen boqolaal qof sidoo kalena ay ku barakiciyen Kumanaan kale.